» लक्ष्मण लिम्बुले जिते फेरि अर्को अवार्ड
लक्ष्मण लिम्बुले जिते फेरि अर्को अवार्ड
१२ माघ २०७७, सोमबार ०९:१७
मकवानपुर, १२ माघ । वाईवाई नेपाल स्टारको फाईनलमा पुगेका लक्ष्मण लिम्बुले फेरि अर्को अवार्ड जितेका छन् । उनले उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा शनिबार थप अवार्ड जितेका हुन् । यसअघि नै उत्कृष्ट ७ छनौटका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका लक्ष्मणले उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड जितेका हुन् । वाईवाई नेपाल स्टारमा स्टाईलिस पफोमरका रुपमा चिनिएका लक्ष्मणले शोमा एकपटक पनि बटम थ्रीको सामना गरेका छैनन् । उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा सविन राईको ‘कालो कालो रातको’ बोलको गीत गाएका थिए । विशेष अतिथि शम्भुजित बास्कोटाले लक्ष्मणको प्रस्तुतिको प्रशंसा गरेका थिए । निर्णायक आलोक श्रीले उनको गायन सँगै स्टाईलको पनि प्रशंसा गरे । निर्णायक अञ्जु पन्तले उनको प्रस्तुति र गायनको प्रशंसा गरेकी थिईन् । निर्णायक रामकृष्ण ढकालले पनि उनको प्रशंसा गर्दै जीतका लागि शुभकामना दिएका थिए । लक्ष्मणलाई पहिलो वाईवाई नेपाल स्टार बनाउनका लागि उनको जिल्लावासीका साथै अन्य स्थानहरुबाट पनि निक्कै सहयोग प्राप्त भएको छ । होम भिजिटका लागि केही समय गृहजिल्लामा पुगेका उनलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि स्वागत गरेका थिए । साथै उनले विभिन्न स्थानमा आफ्ना प्रशंसकहरुमाझ सांगितिक प्रस्तुति पनि दिएका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो सामाग्री–
काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका लक्ष्मणलाई विभिन्न राउण्डहरुमा निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । उनी नेपाल स्टारको मञ्चमा स्टाईलिस पफोमरका रुपमा चिनिएका थिए । ६–७ वर्षको उमेरमै बुवा गुमाएका लक्ष्मणका आमा, एक जना दाजु र दुई जना दिदीहरु छन् । उनी घरको कान्छो छोरा हुन् । संगीत क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागेका लक्ष्मणले आफ्नो अफिसियल गीतहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनी गायक, संगीतकार तथा गीतकार रुपमा पनि परिचित छन् । उनका केही गीतहरु चर्चित बनेका छन् । लक्ष्मणका चर्चित गीतहरु समावेश भएको खुल्दुली एल्बम चर्चामा आएको एल्बम हो । उनले वि.सं. २०७१ सालमा खुल्दुली एल्बमलाई सार्वजनिक गरेका थिए । धरान बजारमा नामक एल्बममा मञ्जु लावतीसँग उनले गाएको ‘म त माथि म्याङलुङ्ग डाँडाको’ बोलको गीत त्यो समयमा निक्कै चर्चित भएको थियो । २८ वर्षीय लक्ष्मण तेह्रथुमको श्रीजुङ निवासी हुन् । ताप्लेजुङ आईडलमार्फत गायन क्षेत्रमा उदाएका लक्ष्मण उनको मावली ताप्लेजुङमै हुर्किएका थिए । सोही क्रममा वि.सं. २०६६ सालमा उनी ताप्लेजुङ आईडलमा सहभागी भएर विजेता समेत भएका थिए । ताप्लेजुङ आईडलपछि उनी वि.सं. २०६७–६८ मा लिम्बुवान आईडलमा पनि सहभागी भएका थिए । जहाँ उनी फस्र्ट रनर अप भएका थिए । सांगितिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेका लक्ष्मणले नेपाली साँगितिक क्षेत्रमा एकदशक भन्दा बढी समय बिताईसकेका छन् । तेह्रथुमको श्रीजुङ माविबाट एसएलसी दिएका लक्ष्मणले थप अध्ययनका लागि धरानमा पुगेदेखि नै विभिन्न कन्सर्ट र गायन प्रतियोगिताहरुमा आफुलाई व्यस्त बनाएका थिए । धरानको महेन्द्र क्याम्पसमा उच्च शिक्षाका लागि भर्ना भएका लक्ष्मणले त्यसै समयदेखि नै संगीत पनि सिक्न थालेका थिए । धरानको सुरसाँझ संगीत विद्यालयमा विनोद प्रियदर्शी राईबाट संगीत सिकेका लक्ष्मणले सोही समयमै ताप्लेजुङ आईडल जितेका हुन् ।
लिम्बुवान आइडलमा दोश्रो भएबापत उनले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार र तीनवटा गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पाएका थिए । २०७० साल बैशाख ४ गते आरबी स्टुडियोमा पहिलोपटक लक्ष्मण लिम्बुको श्वरमा गीत रेकर्ड भएको थियो । उनले गीतमा राम्रो प्रशंसा समेत हासिल गरेका थिए । लक्ष्मणले २०६५ सालमा ‘खोजी प्रतिभाको’ रियालिटी शोको उत्कृष्ट १४ मा समेत पुगेका उनले नेपाल आइडलमा भाग लिएर थिएटर राउण्डसम्म पुगेका थिए । त्यसपछि उनले सिंगिङ स्टार र नेपाल सिंगिङ आइकनमा पनि भाग लिएका थिए । वि.सं. २०६९ सालदेखि काठमाडौँमै बसेर संगीत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका लक्ष्मणका ३० वटाभन्दा बढी गीतहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् ।